अबको बाटो : कि जनविद्रोह कि सैनिक शासन - Sidha News
अबको बाटो : कि जनविद्रोह कि सैनिक शासन
काठमाडौं। यतिबेला मुलुकको राष्ट्रियता ग’म्भीर सं’कटमा परेको छ । विदेशी शक्तिहरुको चरम दवाव र प्रभाव थेग्न नसकेपछि मुलुकको सीमा मात्र होइन मुलुकको अस्मितासमेत धुमिल हुने अवस्थामा पुगेको छ । छिमेकी मुलुकसहित अमेरिका र युरोपियनहरुको चलखेल तीव भएपछि सरकारसहित प्रमुख दलहरुसमेत निरीह अवस्थामा पुगेका छन् । आज एमसीसीको विषयमा दलहरु विभाजित हुन यसैको एउटा उदाहरण हो ।
विश्व हिन्दु महासंघकी महासचिव अस्मिता भण्डारी हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनस्र्थापना मुलुक जोगिने एक मात्र उपाय रहेको बताउँछिन् । उनीसंग गरिएको कुराकानीका केही महत्वपूर्ण अंश यस्ता छन् :
क ) राजनीतिक दलहरु असफल भए । दलहरु पुग्नुपर्ने उच्चतम बिन्दुसम्म पुगिसके । अब ओरालो यात्रा सुरु भैसक्यो।
ख ) यहाँका नेताहरुले पश्चिमाहरुबाट ठूलो धनराशी खाएर मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएका हुन् । अब जनताले यो कुरा बुझिसके, मुलुक हिन्दु राष्ट्र राजसंस्थाको बाटोमा गैसक्यो । अब जनताले नै मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्छन् । राजसंस्था पनि पुनस्र्थापित हुन्छ ।
ग ) दलहरुको सोच परिवर्तन नभए मुलुक कि जनविद्रोहमा जाने छ कि सेना सक्रिय हुनेछ । जनविदोह जनताले गर्नेछन्, त्यसले अहिलेको यो व्यवस्थालाई बढार्नेछ । त्यसो नभए मुलुक बचाउन सेना आउनेछ । के सेनालाई देश दुख्दैन ?
घ ) यो देशमा बामपन्थी जस्तो सामन्ती कोही देखिएन । यो सरकार र नेपालका कम्युनिष्टबाट मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।
ङ ) १८ हजार जनता मा र्ने व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री हुन्छन्, यो देशका लागि विडम्बना हो । अब जनताले एक–एक हिसाबकिताव गर्नेछन् ।
च ) नेपालमा अहिले हिन्दुवादीहरु असुरक्षित छन् । हिन्दु साधु सन्त, पूजारी र अगुवाहरुलाई योजनाबद्ध रुपमा फसाइदैछ । आर्थिक बिचलन, ब ला त्का र लगायतका बिभिन्न आ’रोपमा हिन्दुवादीको चरित्र ह त्या गर्ने प्रयास भैरहेको छ ।
छ ) पृथ्वीनारायण शाहलाई नमान्नेहरुले देश बनाउँछन् भनेर कसरी कल्पना गर्नू ? पुष २७ गते पृथ्वीजयन्तीलाई किन राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउँदैनन् ?
ज ) पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वकारुपमा मनाउनु पर्छ । पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिनको दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ । उनको नाममा हुलुक टिकट प्रकासन गर्नुपर्छ । उनको तस्बिर अंकित मुद्रा प्रकासन गर्नुपर्छ ।
झ ) वर्तमान सरकार राष्ट्रिय एकता विरोधीका रुपमा देखा परेको छ । पुष २७ गते राष्ट्रिय पर्व मान्न अस्वीकार गर्नेहरु राष्ट्रप्रेमी हुन सक्दैनन् ।
ञ ) नेपालमा महिला अधिकार र महिलालाई अवसर दिने विषयमा जति चर्चा हुन्छ,े त्यस अनुसार महिलाहरुले आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । महिलाको क्षमता जाँच गर्नेहरुले पुरुषको क्षमता परीक्षणको प्रश्न नउठाउनु विडम्बना हो ।
ट ) अझैपनि पुरुषहरुले महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । यो पुरुषवादी सोच बदलिन जरुरी छ । मुलुकमा जति परिवर्तन भएपनि मानिसहरुको सोचमा परिवर्तन आउन सकेन।
नेपाल आजले तयार पारेको यो भिडियो बहस हेर्नुहोस: